XULAFADA SACUUDIGA-Turkiga Oo-Baajiyey-Weerar Gaadma Ah Oo-La-la Damacsanaa-Qattar!!…Warbixin…. | Allkisima.com
XULAFADA SACUUDIGA-Turkiga Oo-Baajiyey-Weerar Gaadma Ah Oo-La-la Damacsanaa-Qattar!!…Warbixin….
Waxaa Qoray Admin on Jul 5th, 2017 and filed under wararka Caalamka, Wararka Somaliya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
DUBAI🙁Allkisima)-Wargeyska ThenewKhalij ayaa daabacay warbixin ka hadleysa weerar Milateri oo ay Xulufada Sacuudiga uu hoggaaminayo ay u qorsheeyeen inay ku qaadaan dalka aadka u yar, balse Hodanka ah ee Qatar, hase ahaatee markii uu Turkiga ku dhawaaqay inuu ciidamo u dirayo Qatar ayaa carqalad ku noqday qorshihii Sacuudiga iyo Imaaraadka, kuwaasoo si aad ah uga carooday tallaabada uu Turkiga qaaday.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa ThenewKhalij u xaqiijiyay in Imaaraadka iyo Sacuudiga ay qorsheeyeen weerar Milateri oo xukunka looga tuurayo Boqorka Qatar Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani, balse tallaabadii uu Turkiga ciidamo degdeg ah ugu soo diray Doha ayaa fashiliyay dhagartii ay damacsanaayeen Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Diblomaasi diiday in magaciisa la soo xigto ayaa sheegay in Imaaraadka iyo Sacuudiga dajiyeen qorsho weerar Milateri, iyagoo ka faa’iideeysanaya ka hor inteeysan dalkooda Qatar kusoo laaban Ciidamada dalkaas ee qeybta ka ah Howlgalka dagaalka Yemen.
Diblomaasigaan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamo Imaaraadka leeyahay ay gaareen dalka Baxreyn, kuwaasoo qorshahooda yahay inay dhanka Badda ka weeraraan Qatar, isla markaana la wareegaan Dekadaha dalkaas iyo Garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Hamad International Airport, halka Ciidamada Sacuudiga iyagana qorshahooda uu ahaa inay dhinaca dhulka ka soo weeraraan.
Qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa wuxuu ahaa in marnaba aan si shaac ah loogu dhawaaqin weerarki Milateri, balse uu ahaado mid Gaadmo ah, kadibna xilka laga qaado Tamim bin Hamad Al Thani, laguna wareejiyo ruux ka tirsan dhaxalsugaha.
Balse Go’aankii uu Baarlamanka Turkiga 6-dii Bishii hore ee June ku gaaray in ciidamo loo diro Qatar ayaa hal bacaad lagu lisay ka dhigay qorshihii ay wateen Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaana ku qasbanaadeen inay baajiyaan weerarkii Milatari ee ay la damacsanaayeen Qatar.
Tallaabada uu Turkiga qaaday ayaa waxaa si aad ah uga carooday wadamada Imaaraadka, Sacuudiga iyo Masar, kuwaasoo u arka inuu si weyn u dhaawacay qorshahoodi.
Dalka turkiga ayaa Qatar sanadkii 2014 Heshiis kula galay inuu saldhig Milatari ka sameysto magaalada Doha ee xarunta dalkaas, waxaana heshiiskaas saxiixay oo meel mariyay Baarlamanka Turkiga 6-dii Bishii June ee la soo dhaafay, waxaana durbadiiba Doha gaaray ciidamo iyo saanad Milatari oo uu Turkiga leeyahay,oo weliba Awood Leh.
Ugu dambentiina Xiisada dalalka Khaliijka ayaa soo ifbaxday 5-tii June ee sanadkan, waxaana wadamada Imaaraadka, Sacuudiga,Masar iyo Baxreyn ay ku dhawaaqeen inay xiriirka u jareen dalka yar ee Qatar, iyagoo ku soo rogay cunaqabateyn dhulka, Badda iyo hawada ah, waxaana ay ku eedeeyeen inay taageerto kooxaha argagixisada, sidoo kale waxyaabaha Qatar lagu eedeeyay waxaa k amid ah ineey xiriir dhow la leedahay dalka Iiraan. Balse Doha ayaa diiday dhamaan eedeeymaha loo soo jeediyay.